Bloggin 'Adịghị Mfe! Ọbụna na Vox | Martech Zone
Monday, December 11, 2006 Fraịde, Ọktọba 24, 2014 Douglas Karr
update: Emechiri ikpo okwu Vox na 2010.
N'ihe dị ka n'oge na-adịbeghị anya, ana m echebara echiche ịnyekwu akwụkwọ na ụfọdụ ndị na-ekwu okwu n'ihu ọha na ịde blọgụ. N'ihi gịnị? Bloggin adịghị mfe! Ndị ụlọ ọrụ ghọtara nke a… itinye onwe gị 'ọtọ' na webụ nwere ike ọ gaghị abụ ezigbo atụmatụ. E wezụga atụmatụ na ọdịnaya, agbanyeghị, bụ teknụzụ.
Bloggin 'adịghị mfe.
O doro anya na nnukwu ndị na-ede blọgụ na-eme ka ọ dị mfe. Ha na-atụpu blog wee zute ọtụtụ puku dollar na mgbasa ozi. Ndị mmadụ na-atụbara ha ego. Ma olee maka Mama & Pop nke na-achọ ịdebe blọgụ dị mfe gbasara azụmaahịa ma ọ bụ ezinụlọ ha? Weebụ nchịkọta, ikike, njikarịcha ọchụchọ, ogo, trackbacks, pings, post slugs, comments, onye ọrụ mepụtara nzaghachi, edemede, nkpado, faili ntanetịime, ndepụta nchịkọta, ndebanye aha email… o zuru ezu iji mee ka onye ọ bụla gbapụ na iti mkpu!
Ọ dịịrị m mfe n'ihi na anọ m ya otu afọ wee kesaa akụkụ ọ bụla nke ịde blọgụ. Enwetara m ya. Abụ m geek. Ọ bụ ihe omume ntụrụndụ m, ọrụ m, na ịhụnanya m.
Nwa ohuru na mgbochi bu Vox. Ahụrụ m ụfọdụ nseta ihuenyo nke Vox maka ịkwanye ọdịnaya (ọdịyo, vidiyo ma ọ bụ ihe oyiyi) n'ime post ahụ ma nwee obi ụtọ na otu ha si dị mfe. Ma nke ahụ bụ ebe mfe kwụsịrị.
Nke a bụ nseta ihuenyo:
E nwere ndị na-erughị 30 njikọ na m blog peeji nke ihe na-eme. Naanị m chọrọ ị bulite ihe oyiyi maka blog ma mechie ihe oyiyi blog maka ihe ngosi profaịlụ. Ọ bụrụ n ’ị ga - ekwupụta onwe gị dịka ngwa ọrụ“ dị mfe ”maka ịde blọgụ, ị ga - amata na ị ga - eme ka ọ dị mfe. Onweghi uzo m gha akpo enyi m na ngwa a. Ọ ga-akara m mma ịgwa ha okwu WordPress or Blogger.
Ikekwe otu n'ime nsogbu ndị Vox bụ na ndị na-ede blọgụ na-emetụta ya maka ịde blọgụ. Ọ bụrụ na SixApart chọrọ n'ezie ịme usoro ịde blọgụ dị mfe, ha kwesịrị ịchọ ndị na-agatụbeghị na mbụ. Amaghị m ihe ọnụego nnabata maka ịrịgo Vox, mana ana m enwe obi abụọ na ha dị egwu.
Tags: ịde blọgụvox
adCenter maka Adsense… nke a enweghị ike ịdị mma
Dee 12, 2006 na 7: 47 AM
Make na-ekwu okwu ọma Doug. Ọdịnihu na uto na ịde blọgụ na ndị na-abịa na blọọgụ gị bụ ndị "oge". Fọdụ ndị mmadụ nwere ike amataghị ihe okwu blọgụ pụtara taa.
Dec 25, 2006 na 10:58 PM
Achọpụtara m Vox mgbe ọ malitere nke ọma yana ọ masịghị ya. Ọ nwere mkpuchi mara mma, mana mgbe ọ gwuru ala, ọ bụghị ihe ọchị ma ọ bụ dị mfe iji. Echere m na ha nwere ike iji ihe karịrị usoro ahụ.